व्यस्त हुनुहुन्छ ? अफिसमै गर्नुस् यसरी योग अभ्यास | Hamro Doctor News
व्यस्त हुनुहुन्छ ? अफिसमै गर्नुस् यसरी योग अभ्यास
By श्याम गिरी, योग गुरु
मानिसको बेफुर्सदी जीवनले शारीरिक व्यायाम गर्न पनि समय अभाव भएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कार्यालयमा बसेरै योग गर्न सकिन्छ । फुर्सदको समयमा कार्यालय समयमै पनि योगका यी आसनहरु सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ ।
यदि तपाईं अफिसका कामले फुर्सद पाउनु हुन्न र शारीरिक व्यायाम गर्न भ्याउन हुन्न भने यी योगा अभ्यासले तपाईलाई दैनिक जीवनमा स्वस्थ रहन मद्दत गर्दछ । अफिस कोठाको साँघुरो ठाउँमा यी योगा अभ्यास गर्न सकिन्छ । यसले तपाईको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा सहयोग पुग्दछ । यो योगा अभ्यासले कार्यालय समयमा तनाववाट मुुक्त हुन सहयोग गर्दछ ।
Last modified on 2020-01-19 11:54:09